Khatarta Aan La Dareensanayn: W/Q: Sakariye-Awaare. | HAYAAN NEWS
Khatarta Aan La Dareensanayn: W/Q: Sakariye-Awaare.
June 3, 2017 - Written by Mustafe Jannaale
Deegaanno faro badan oo dalka ka mid ah waxa fara baas ku haya Cudurka Shuban-biyoodka (Cholera), meelaha dadku jiifaan waxa ka mid ah Buuhoodle iyo tuulooyin badan oo ku hareeraysan. Halkan aad aragtaan waa Magaalada Burco oo uu imika ku sii fidayo. Goobtan oo ah Iskuul Nursig-ka lagu barto oo dhamaantii laga dhigay waadh la jiifayo dadka markii uu buux dhaafayna sida aad sawirradan ku aragtaan dadkii la jiifiyey bannaanka hore (Gaydhka).
Dhacdooyinka la yaabka leh waxa ka mid ah: in dadkaasi marka roobku uu soo daato ay la jirsadaan kuwa jiifa Cisbataalka TB-da oo qaarkoodna la sheegay in ay Shubankii iyo TB-dii ba wada qaadeen.
Waxa kale oo jirta in dadku ay Faleebooyinka iyagu soo iibsanayaan oo ka aan haysannini uu iska jiifayo meesha, Waxan arkay nin baadiyaha ka soo qaaay qof cusurku asiibay, dabeeto markii loo qoray dawadii ee la yidhi soo iibso, ku jawaabay: “Shilin ma hayo” oo qofkii oo yaalla muddo uu raadinayey lacagtii, saacado ka dib markuu arrinkii sheegayna dar ilaahay looga bixiyey.
Waxa kale oo jirta in aan baabuurta iyo dadka qaada qof xanuunsanaya ee goobta geeya aan markay soo baxayaan la buufin inta ugu badan, taasina ay halis ku tahay in uu sii faafo xanuunku.
Xanuunkan oo ah mid intii roobkan gugu’ bilaabmay aad u faafaya, dawladduna aad mooddo in ay sahashanayso oo aanay daawayntiisa iyo xakamayntiisa ba sidii loo baahnaa xil isaga saarin. Sida ay Dhakhaatiir ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka qaarkood ay qireena waxay sheegeen in arrintaa laga gaabiyey lana qariyey sababo jira awgood, oo xataa ay gaadhay heer ay Hay’adaha Gargaarku waraaq u soo diraan Wasaaradda Caafimaadka ay leeyihiin “aanu xanuunkan wax ka qabannee hana weyddiinina uun lacag kimishar ah.
Waxa kale oo khatartan aan la iska xil saarini ay ka dillaacday Xabsiyada Magaalada Burco oo maxaabiista qaarkood u dhinteen, tiro aad u badan oo boqol ku dhowina ay la ildaranyihiin. Xaaladuhu waxay marayaan xilligii la fasixi jiray xataa iskuullada.
Waaan soo jidin lahaa in Lacagahaa Madaxtooyadu uruurisay qorshaheeda lagu daro sidii loo la tacaali lahaa xanuunkaas Xukuumadda iyo Dhakhaatiirta waddankuna ay si weyn ugu soo jeestaan oo uga hawlgalaan arrinkaas.
Ma aha arrin la sahashan karo. Ee wa in la iska kaashadaa sidii loo bukaankana loo badbaadin lahaa, faafistiisatana loo xakamayn lahaa. Dadkan magaalooyinkana waxa ka daran tuulooyin badan oo ku teedsan Gobolka Togdheer. Ilaahayna ha ka kor qaado xanuunkaas bulshada.